Top ọgwụ mahadum Ukraine 2017 - Education Bro
Top ọgwụ mahadum Ukraine 2017
“EducationBro” Magazine kwadebe ogo nke ọgwụ na ahụ ike na mahadum na Ukraine. Anyị na-atụ ozi a ga-enyere mba ụmụ akwụkwọ na-ahọrọ kasị mma nhọrọ ịmụ nkà ọgwụ na Ukraine. Mbbs ọmụmụ na Ukraine nwere elu àgwà na ala nkuzi ụgwọ.
Anyị na-achọ a nhọrọ maka ogo (na-agbadata iji nke mkpa):
The àgwà nke mmuta
Nyocha nke mba ọzọ ụmụ akwụkwọ banyere mahadum
Ọnụ ọgụgụ nke ndị mba ọzọ ụmụ akwụkwọ na mahadum
Modern na mahadum ogige na akụrụngwa
Ndị na-eri agụmakwụkwọ
N'obodo ebe mahadum na-emi odude
Nnweta nke website na-elekọta mmadụ peeji nke. The ugboro ole nke ha mmelite.
ebe a bụ n'elu 8 kasị mma ọgwụ mahadum dị na Ukraine:
Ternopil State Medical University were 8 -ebe anyị nọ ogo nke ọgwụ mahadum. Otu dị ka afọ gara aga.
Ihe di nma TSMU? Na mbụ – mba ọzọ ụmụ akwụkwọ hụrụ ya.
Mgbe anyị chikota fim bụ maka, anyị na-ekwu na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ n'ebe onye ọ bụla na mahadum. Ụmụ akwụkwọ nke Ternopil Medical Institute mewere nke ọma banyere omume ha mahadum na kwuru na ha na-amasị na-amụ n'ebe a. N'otu oge ahụ, ha kwuru na ọtụtụ n'ime campuses nke mahadum mkpa nke modernization. Site cons dị ka ha kọrọ na obodo bụ a bit agwụ ike, e nwere obere ntụrụndụ. Ma, ebe a ọnụ ala mmụta, nke dị mkpa maka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ. Anyị nwere olileanya na Ternopil State Medical University ga-mma hist ọnọdụ n'afọ ọzọ.
Donetsk National Medical University nwere mgbe ọjọọ ugbu a. Ọ bụ ọnụ ọgụgụ 3 afọ gara aga, ma nwetara naanị 7th ebe 2017. N'ihi na nke agha nọ n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Ukraine, a manyere ịgbanwe obodo-ya. Nke a bụ maa-ezighị mmetụta na ebe ọ dị n'akụkụ ranking. Ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi na nke a bụ eziokwu, anyị gaara eche na-enye ya a mbụ ma ọ bụ abụọ.
Anyị ka na-enwe olileanya na mma n'oge a mahadum ga-abịa n'oge na-adịghị. Na oge a na-amụrụ ihe nwere ike ịchọ ụfọdụ mma nhọrọ.
Otu dị ka afọ gara aga. ODNMU nwetara 6 ebe ogo. One ọzọ mahadum na-ewere ala ọnọdụ n'ihi na ya website na-elekọta mmadụ profaịlụ. O di nwute na nke a bụ a nnukwu nsogbu nke Ukraine mahadum.
N'agbanyeghị eziokwu na a na-akpata nwere dịghị ihe ọzọ mmetụta na ọnọdụ na ogo, ọ bụ ezughị na mahadum nwere ike izere 6 edoghi. N'ezie, ochie na ngwá na ogige, ka a na idozi ọjọọ oke. The University na-emi odude ke obio Odessa, nke bụ isi resotu na ọdụ ụgbọ mmiri nke obodo. Nke a na-enye oké ohere maka ntụrụndụ nke ụmụ akwụkwọ, ma nke a bụ ka njọ utịp ke-eri nke ndụ. The ụmụ akwụkwọ’ echiche banyere Odessa National Medical University dị iche iche. Ọ bụghị ihe niile ụmụ akwụkwọ na-enwe nnọọ afọ ojuju ha mahadum.
Number 5 ọzọ. Gịnị mere ha na-ezere elekọta mmadụ na netwọk. Na mahadum weebụsaịtị mkpa mmelite. Ọ bụ jogburu onwe ya maka nnukwu ọnụ ọgụgụ nke Ukraine mahadum. ugbu a banyere Ivano-Frankivsk National Medical University.
City bụ nnukwu. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ nwere ọjọọ echiche banyere ha mahadum, ma ụfọdụ kwuru na ọ bụ magburu onwe ya. Na ha nwere echiche dị iche banyere àgwà nke mmuta, ma a otutu n'ime ha na-eche na agụmakwụkwọ bụ ihe dị oké ọnụ ọzọ ọgwụ mahadum dị na Ukraine.
Ọ bụ ihe kasị mma na mahadum afọ ikpeazụ anyị ogo, ma ọ bụghị ya furu efu 3 positions. Bogomolets National Medical University is good, ma ọ bụ nnọọ oké ọnụ ma na chọrọ prepaymen si mba ụmụ akwụkwọ.
Ọ na nsogbu na isi obodo nke Ukraine – Kyiv. Ọ nwere magburu onwe ya mma nke muta na oge a na akụrụngwa maka ụmụ akwụkwọ. Also it is difficult to study here. Ya mere,, if you going to study medicine in Ukraine and have a lot of money, ị nwere ike họrọ Bogomolets National Medical University.
Lviv National Medical University bilie n'ọnọdụ nke abụọ anyị ranking. N'agbanyeghị echiche dịgasị iche iche banyere mahadum, niile ụmụ akwụkwọ nwere nnọọ afọ ojuju na obodo nke Lviv. Mkpara nke EducationBro Magazine mmasị ha campuses na àgwà nke mmuta. Ọ bụ n'ezie ezi mahadum ịmụ nkà ọgwụ na Ukraine. Anyị nwere obi ike na mahadum kwesịrị nke abụọ ebe a afọ. Onye ma, ma eleghị anya, a ntakịrị mgbalị na ọ ga-abịa si n'elu na-esote afọ? Anyị ga ahụ.
Ụmụ akwụkwọ nke a mahadum nwere ezi uche banyere ya kwa. Anyị makwaara na a University bụ ewu ewu n'etiti ndị mba ọzọ ụmụ akwụkwọ. Otú ọ dị, anyị mara na VNMU nwere ogbenye website,anyị ahụghị ya ukara peeji nke na-elekọta mmadụ netwọk. Dịkwa anyị nnọọ anya mgbe hụrụ thatt ha kọntaktị page bụ efu. Anyị bi n'oge a na anyị na-eche na ọ bụla mahadum kwesịrị nwere zuru peeji nke na n'elu elekọta mmadụ na netwọk. Anyị na-eche na nnukwu akụkụ nke mahadum ngwá na nke ochie na kwesịrị ntaghari ohuru.
Ebe a bụ n'elu ọgwụ mahadum dị na Ukraine 2017!
Bukovinian State Medical University bụ nnọọ ama na-ewu ewu na Ukraine. Ọ na nsogbu na obere obodo, ma obodo a nwere ya amara. Anyị na-n'ezie ezigbo anya site n'obodo a na ikuku. University emesi a pụrụ isi kwuo ya ọbụna ihe. Dị nnọọ anya na isi ụlọ. Anyị na-mmasị uru nke nkuzi ụgwọ na àgwà nke mmuta. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-kweere na ha mahadum dị mma. Nke a afọ Bukovinian State Medical University bụ n'ezie ịtụnanya ebe na-amụ ọgwụ ọmụmụ (General Medicine, dentistry, Pharmacy, Nursing) na Ukraine na Europe.
Nke a afọ 1st ebe nwetara mahadum na ala nkuzi ụgwọ ma dị ọnụ ala dị ndụ na-akwụ ụgwọ. Ka ọ dịgodị, ọ dị oké mahadum. Ya mere,, n'ezie na anyị na-eche na a afọ ọ ga-abụ ihe ndị ọzọ mfe maka ụmụ akwụkwọ na-ahọrọ ọgwụ mahadum maka muta na Ukraine.. Ebe ị ga-esi na- magburu onwe Medical Education, na ị na-amụrụ obi ga na-egbuke egbuke ma na-eji obi ụtọ.
Onye ma, ma eleghị anya, ihe ga-agbanwe na-esote afọ! agbanyeghị, Ukraine bụ oké ebe ọmụmụ nkà mmụta ọgwụ. Ọ bụ mara mma na ya na-eri nke dị ndụ na nkuzi ụgwọ.
UPD: ebe ọ bụ na 2016 mbanye usoro ke Ukraine mahadum n'ihi na ndị mba ọzọ ụmụ akwụkwọ aviable via Ukrainian Admission Center.
-Eri nke bi na Ukraine